Munyu Uye Pepper Series
Electric Munyu Uye Pepper Grinder
Chinyorwa Munyu Uye Pepper Grinder
Magetsi Kofi Grinder
Chinyorwa Kofi Grinder
Nzira yekusarudza pepper grinder kubva kumabasa?
Kune misiyano yakawanda mumabasa eiyo grinder grinder, isu tinounza mashoma akajairwa mapoinzi ekuongorora maitiro ekusarudza kubva pamabasa. 1. Sarudzo yezvinhu zvepakati Paunenge uchitenga pepper grinder, chakanyanya kukosha chinhu chinhu cheiyo chipande chechigadzirwa. Parizvino, zvakajairika zvinhu zvakakandwa simbi, simbi isina chinhu uye zvedongo. Kana iwe uchida kuishandisa mukicheni inopisa uye ine hunyoro, simbi isina simbi isiri nyore kuita ngura isarudzo yakanaka, uye inogona zvakare kushandiswa kukuya dombo munyu ....Verenga zvimwe »
Nzira yekusarudza pepper grinder maitiro uye kugona
Mhiripiri inogona kunzi inguva yakakosha mumidziyo yakawanda. Kana iwe uine chinobatsira pepper grinder, iwe unogona nyore kushandisa chitsva pasi pepper kuwedzera flavour kune yako ndiro. Nzira yekusarudza akasiyana maumbirwo uye kugona? Chimiro che grinder pepper 1. Chinyorwa chemanyorerwo mhando Vanhu vanofarira kubika vachanyatsoda kurira krisimasi kana mhiripiri yatsikwa nayo, uye kunhuwirira kunouya nayo. Iyo inyanzvi kushandisa! Nekudaro, iri mhando peppe ...Verenga zvimwe »
Peugeot zvirokwazvo izita reFrance. Mhuri yePeugeot yakatanga kuburitsa dzakasiyana siyana dzekugaya dzinokanganisa senge zana ramakore gumi nemasere. Iyo "Peugeot Kambani" iyo yakaburitsa ichi pepper shaker yakaita kuti vanhu vazhinji vavhiringidzike zvishoma nekuda kwezita reFrance Peugeot Motor Company. Zvakangofanana. Muchokwadi, vese Peugeot mhiripiri shaker uye Peugeot mota ndevekambani imwe chete. Peugeot ndiye akatanga kuburitsa mapepa ekugaya mhiripiri. Hapana aifunga kuti kambani iyi yaizogadzira mota kumashure ikako. Mhuri yePeugeot yakaisa mari mukugadzira kweanopfuura makore mazana maviri. Makore akanonoka ...Verenga zvimwe »
Wuxi Tricera Kutengesa Co, Ltd.
Kwete. 592 Shengan West Road, Huishan District, Wuxi, Jiangsu
How kusarudza pepper grinder manyorerwo uye ca ...